10 Matipi Ekufamba China Nechitima | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > 10 Matipi Ekufamba China Nechitima
(Last Updated On: 22/01/2021)
Yetsika uye yazvino, serene uye chipatapata, China ndiyo imwe yenyika dzinonakidza kuongorora, kunyanya nechitima. Kuronga rwendo kuenda kuChina kunogona kukuremedza, saka taungana 10 matipi ekufamba kuenda kuChina nechitima.
Kubva pakurongedza kusvika kunotora matikiti echitima, izvi 10 matipi ekuenda kuChina nechitima, ichagadzirisa chero nyonganiso, uye chengetedza iyo inonyanya kunakidza.
1. Zano Rekuti Ungafambe Sei neChina Nechitima: Ita Ongororo Yako
MuChina, uchawana varipo 2 mhando dzezvitima: Yekumhanyisa-kumhanya uye echinyakare zvitima. Zvakakosha kuti iwe uite tsvagiridzo yako pamberi, kuti unzwisise zvinoshanda zvakanyanya kune yako bhajeti yekufamba, mhando yerwendo, chinguva, uye kugadzikana mwero. Izvo zvinonyanya kukosha kana uri kufamba nevana.
China zvitima - Yekumhanyisa zvitima zvine nhamba G, D, kana C, ichimhanya nepamusoro kumhanya kwe 350 km / h. yakagadzirirwa bhizinesi / VIP kana zvigaro zvekutanga-kirasi.
Iwo echinyakare zvitima anonzi muna L, K dzakakurumbira, uye upe zvigaro zvakaoma, vakaoma kana vakapfava vavata, uye deluxe akapfava akarara. Kufamba pa 160 km h zvakachipa.
2. Zano Rekuti Ungafambe Sei neChina Nechitima: Bhuka Iyo Yakakodzera Chitima Kirasi
Zvitima muChina zvine makirasi mana: Chigaro chakaoma, chigaro chakapfava, akarara zvakaoma, nyoro akarara.
Chigaro chakaoma: Iyo ndiyo yakachipa kwazvo kirasi yechitima, uye kazhinji pane 5 zvigaro pamutsara. saka, kana uri kufamba mubhajeti, iyi ndiyo sarudzo inonyanya kufarirwa, asi funga kuti zvakare iri sarudzo yakajairika pakati pevaChinese. saka, iwe unogona kunge uri pane ruzha uye uzere nevanhu chitima rwendo.
Kurara zvakapfava: inenge yakapfava uye ine yakakwira chitima tikiti mwero, asi zvakanyanya kugadzikana.
Akaoma hope: 6 berths, uye hapana musuwo wekuzvimiririra kana kuzviparadzanisa nemamwe makamuri.
Kurara zvakapfava: Kirasi yechitima yakanakisa pazvitima zveChinese, uye yakakurudzirwa kwazvo kune iwo marefu-nzendo ezvitima. Ndiyo sarudzo inodhura kwazvo, asi iwe unenge uri mune imwe kabhini iri yega, pamusoro 4 anorara, uye nezvako zvemunhu zvigadziko. Kana iwe uri murume nemudzimai vanofamba, ipapo deluxe ichave yakakwana kwauri.
3. Svika Pachitima Chechitima Pamberi
Zviteshi zvechitima zvakabatikana muChina ndizvo zvikuru, nyonganyonga, uye inosanganisira mukwende x-ray maitiro. saka, iwe unofanirwa kusvika zvirinani 40 maminetsi nguva yako yekubva kwechitima isati yasvika. Nenzira iyi, unenge uine nguva yakakwana yekutonga pasipoti, chekuchengetedzwa, uye uwane chikuva chechitima.
4. Rongedza Zvikafu zvishoma Uye Zvinwiwa
Chikafu nezvinwiwa zviri mungarava zvinogona kudhura zvakanyanya, kupfuura pakutenga muguta. saka, zvirinani ugadzirire pamberi, uye utenge chikafu nezvinwiwa pamberi, uye usatenga zvinotengwa zvakadhura kubva kumatiraki ezvitima muchitima. Chibereko chitsva, sandwiches, uye kunyange KFC zvidyiwa zvikuru zvekufamba kwako kwechitima kuChina soro-nokukurumidza nezvitima.
5. Zano Rekuti Ungafambe Sei neChina Nechitima: Rongedza Chako Chako Chimbuzi Zvakanaka
Izvo zvivakwa zvepamusoro-kumhanya uye mabara ezvitima muChina ndezvechizvinozvino. Iwe ungangowana zvese zviri zviviri squat uye zvemazuva ano dzimba dzekugezera pachitima chega chega. zvisinei, zvirinani urongedze rako wega chimbuzi, sezvo izvi zvinoda kupera zvakanyanya-kutsanya pazvitima zvinomhanya. Pamusoro pe, hazvisi zvese zvitima zvine dzimba dzekugezera, saka rongedza zvinyoro nyoro nyoro kuitira, kugara wakatsva, uyezve yekushambadzira shampoo bhodhoro nesipo.
6. Pfeka Zvigadziko
Kupfeka matete kunogara kuri zano rakakura rekufamba kwechitima, sezvo iwe usingakwanise kuenzanisa AC pazvitima. wo, kana uri kugovera kabhini yako, hauzovi nzvimbo yakasarudzwa yekuchinja, uye kupfeka matanda zvinoreva kuti unenge wakagadzirira kuzorora, rara pamusoro vakarara zvitima, uye chero munhu anofamba, murume kana mukadzi, kugovana newe kabhini yechitima.
Kupfeka mateteji ezvitima anofamba muChina tip kunotitungamira kune imwezve yakakosha tip yekupaka mwenje. Mari yekutakura muzvitima kuChina inogumira 20 kg pamunhu. Ipo paine zvisingawanzo mubhodi cheki, mukwende nzvimbo yezvitima muChina yakaganhurirwa, saka zvirinani kurongedza mwenje, uye chengeta mukwende wako padhuze newe, kana kana nzvimbo ichibvumidza, mukamuri rechitima, panzvimbo yezvitima zvekuchengetedza.
Kana iwe uri kufamba panguva ye Chinese mazororo, wobva wagadzirira zvitima zvakazara. saka, iwe uchada kuti bhegi rako rive pedyo uye rionekwe pakati pemikwende yese.
8. Tenga Chitima Tiketi Pamhepo
Unogona kutenga tikiti rechitima kuchiteshi chechitima, kubva kumasangano ekufambisa, uye kuburikidza nehotera yako.
Iwe uchawana akanakisa mareti kana iwe ukatenga yako chitima tikiti muChina, paIndaneti. Sevha Chitima ingafare kukubatsira iwe kuti uwane iyo yakakodzera tikiti yerwendo rwako rwechitima kuyambuka China, nemutengo wakanakisa. Uyezve, iwe uchaona zviri nyore kubhuka yako tikiti tikiti pachikuva chinotaura Chirungu, kupfuura nevamiriri veChinese pachiteshi chechitima, hotera, kana wekufambisa.
9. Uyai neNzeve
Kunze kwekunge iwe uri kuronga kufamba 1 kirasi, iwe unofanirwa kuunza mahedhiyo. Zvitima zvepamusoro-soro muChina zvinozivikanwa kwazvo pakati pevagari vemo, uye zvitima zvechivanhu zvinogona kunge zvakabatikana zvikuru. saka, kana uine rwendo rurefu kuyambuka China, rongedza mahedhiyo kuitira rwendo rwakachengeteka uye rwakanaka.
10. Zano Rokufamba China Nechitima: Bhuku rako Chitima Matikiti Pamberi
Tiketi dzechitima chepamusoro-soro muChina dzinoda kupera nekukurumidza. saka, iwe unofanirwa kutenga yako tikiti tikiti kanenge mwedzi pamberi. Mitikiti inotengeswa kare kare 30 mazuva asati asvika zuva rekuenda. Kusiya tikiti kubhuka uye kuronga rwendo kusvika kuminiti yekupedzisira iri kukanganisa kwekufamba kunodzivirira, kunyanya muChina.
Dzidzisai kufamba inzira yakanaka yekutanga yako eco-hushamwari rwendo rwekumaruwa eChina, maguta, uye maonero. pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga zororo rako kuChina nechitima.
Unoda here kupinza yedu blog positi "Matipi gumi Ekufamba China Nechitima" kupinda yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travel-china-train%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura zh-CN kuita / fr kana / de uye mimwe mitauro.
Zvokuita Europe In February & Travel Tips